အလုပ်သွားဖို့ Taxi တားစီးတာ.. Taxi စီးနေရင်းနဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလို့ စမ်စုမိလိုက်တယ် – စှယျစုံသုတ
အလုပ်သွားဖို့ Taxi တားစီးတာ.. Taxi စီးနေရင်းနဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလို့ စမ်စုမိလိုက်တယ်
အလုပ်သွားဖို့ taxi တစ်စီးတားလိုက်မိသောအခါ taxi မောင်းတဲ့အဘရဲ့အဖြစ်က ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) အလုပ်သွားဖို့အိမ်ကအထွက် taxi တစ်စီးတားလိုက်မိတယ်
အသက်အရွယ်ကလဲ ကြီးနေတာကြောင့် ဈေးမဆစ်တော့ဘဲ အဘပြောတဲ့ဈေးနဲ့ဘဲ စီးလိုက်တယ်။ Taxi စီးနေရင်းနဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတခုဝင်လာတယ် ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ သူ့မိန်းမကို ဆေးသွင်းပေးဖို့ ငွေလာသွင်းပေးဖို့ အကြောင်းကြားတဲ့ဖုန်းလေး ကြားကြားချင်းတကယ်ကို စိတ်ထဲမကောင်းသွားတာပါ ခနနေတော့ နောက်ထပ်ဖုန်းတခုထပ်ဝင်လာတယ်။
အိမ်ရှင်က အိမ်ဖယ်ပေးဖို့ပြောတဲ့ဖုန်း တကယ်စိတ်ထဲကိုဆို့သွားတာ အာ့တာနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အဘအကြောင်းလေးမေးကျိတော့ ဒီနေ့မနက်ဘဲ အဘဇနီးကကျနော်လဲဒီ့ထက်ပိုစပ်စုချင်တာနဲ့ အဘတို့မှာ ကျောထောက်နောက်ခံ သားသမီးတေမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ အဘမှာမျက်ရည်လေးဝဲပီး သားရယ် အဘကအရင်တုန်းက express တွေမောင်းတော့ ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေသေးတော့ ရှိတာလေးတွေထုခွဲရောင်းပီး
သား ၃ယောက်ကို နိုင်ငံခြားပို့ပေးခဲ့တာတဲ့ သူတို့ဆီက ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ အခုတော့ ပို့လိုက်တဲ့နေ့ကစပီး ငွေရောလူရော ဘာအသံမှ မကြားရ တော့တာတဲ့ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး အာ့လို သားသမီးတေရှိတာ။
လမ်းမှာ အာ့လိုအဖိုးတေကိုတွေ့ရင်တတ်နိုင်သလောက်လေးကူညီပေးကြပါလို့၊ ကျနော်ကတော့ ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အဖိုးရဲ့ ဇနီးအတွက် ဆေးဖိုး ၅၀၀၀၀ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖွားလဲ အမြန်ဆုံးသက်သာပီး သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်
အလုပျသှားဖို့ taxi တဈစီးတားလိုကျမိသောအခါ taxi မောငျးတဲ့အဘရဲ့အဖွဈက ရငျထဲမကောငျးဖွဈမိပါတယျ။ အလုပျသှားဖို့အိမျကအထှကျ taxi တဈစီးတားလိုကျမိတယျ
အသကျအရှယျကလဲ ကွီးနတောကွောငျ့ ဈေးမဆဈတော့ဘဲ အဘပွောတဲ့ဈေးနဲ့ဘဲ စီးလိုကျတယျ။ Taxi စီးနရေငျးနဲ့ အဘဆီကို ဖုနျးတခုဝငျလာတယျ ဆေးရုံတငျထားရတဲ့ သူ့မိနျးမကို ဆေးသှငျးပေးဖို့ ငှလောသှငျးပေးဖို့ အကွောငျးကွားတဲ့ဖုနျးလေး ကွားကွားခငျြးတကယျကို စိတျထဲမကောငျးသှားတာပါ ခနနတေော့ နောကျထပျဖုနျးတခုထပျဝငျလာတယျ။
အိမျရှငျက အိမျဖယျပေးဖို့ပွောတဲ့ဖုနျး တကယျစိတျထဲကိုဆို့သှားတာ အာ့တာနဲ့မနနေိုငျမထိုငျနိုငျ အဘအကွောငျးလေးမေးကြိတော့ ဒီနမေ့နကျဘဲ အဘဇနီးကကနြျောလဲဒီ့ထကျပိုစပျစုခငျြတာနဲ့ အဘတို့မှာ ကြောထောကျနောကျခံ သားသမီးတမေရှိဘူးလားလို့မေးလိုကျတော့ အဘမှာမကျြရညျလေးဝဲပီး သားရယျ အဘကအရငျတုနျးက express တှမေောငျးတော့ ငှရေေးကွေးရေးအဆငျပွသေေးတော့ ရှိတာလေးတှထေုခှဲရောငျးပီး
သား ၃ယောကျကို နိုငျငံခွားပို့ပေးခဲ့တာတဲ့ သူတို့ဆီက ပွနျရမယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ အခုတော့ ပို့လိုကျတဲ့နကေ့စပီး ငှရေောလူရော ဘာအသံမှ မကွားရ တော့တာတဲ့ တကယျစိတျမကောငျးဘူး အာ့လို သားသမီးတရှေိတာ။ လမျးမှာ အာ့လိုအဖိုးတကေိုတှရေ့ငျတတျနိုငျသလောကျလေးကူညီပေးကွပါလို့၊
ကနြျောကတော့ ကနြျောတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အဖိုးရဲ့ ဇနီးအတှကျ ဆေးဖိုး ၅၀၀၀၀ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျ။ အဖှားလဲ အမွနျဆုံးသကျသာပီး သာယာခမျြးမွတေဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
မူရငျးပို့ဈပိုငျရှငျအား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ
အမေမရှိတော့တဲ့သားအတွက် အမေများနေ့မှာ အမျိုးသမီးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ပွဲတက်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်
ပိုက်ဆံရပြီးရောဆိုပြီး ပြီးစလွယ်ဆောက်တဲ့ အိမ်ဆောက်သူတွေကြား ရင်လေးစရာ မြန်မာပြည်အကြောင်း အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးရေးတဲ့စာ